Children sing at the - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: children sing at the opening ceremony (Inglés - Birmano)
မူလအစတွင်InsertInsert" [Entry] "at the end
He is at the police station.
မူဆတာဖာကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အဖမ်းခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူ၏ မိသားစုက အားပေးခဲ့ပါသည်။
ယောရှုသည် ကျောက်ထားများကို လုပ်၍ ဂိဘာရာလုတ်အရပ်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ပေးလေ၏။
After testing over one hundred children at the facility,apreschool student was found to be carrying the virus.
ကလေးငယ်တစ်ရာကျော်အား ဆေးရုံတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မူကြိုကျောင်းသားတစ်ဦးတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဟေသအမျိုးသားပရိတ်သတ်၌၊ မြို့တံခါးသို့ ဝင် သောသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ၊ အာဗြဟံဥစ္စာဘို့ လုံခြုံစွာ အပ်ပေးလေ၏။
Another sign held at the Benghazi protest today.
#Benghazi(ဘန်ဟာဇီ)က မင်းကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
And why stop at the flag or the National Anthem.
But he probably thought he was at the Twitter HQ.
The image could not be created at the specified location
စခရင်၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သော command များကိုပြမည်
Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders
ထာဝရဘုရား၏ သန့်ရှင်းသူတို့၊ ထာဝရဘုရား ကို ထောမနာသီချင်းဆိုကြလော့။ သန့်ရှင်းသောနာမ တော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။
ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မိမိတို့အမွေခံရသော မြေထဲ က၊ မြို့နှင့် မြို့နယ်တို့ကို ပေးကြ၏။
တဲတော်တံခါးဝ၌လည်း၊ ကုလားကာကို ဆွဲကာလေ၏။
du mangler at betale (Danés>Alemán)light of rome (Inglés>Latín)zastawka serca (Polaco>Inglés)namamalat ang balat (Tagalo>Inglés)ego sum superbus vobis (Latín>Alemán)i've got more issues than vogue (Inglés>Italiano)soedet (Danés>Inglés)geeister kaiserschmarrn (Alemán>Italiano)with pain comes strength (Inglés>Italiano)smily (Inglés>Francés)hola papi (Español>Inglés)tu igitur nihil vidis (Latín>Danés)eyşan (Alemán>Inglés)door trigger (Inglés>Italiano)jednotlivé (Checo>Francés)qifsha rot (Albanés>Italiano)one does not simply (Inglés>Francés)afiyet olsun canim (Turco>Francés)gegenunterzeichneten vertrag (Alemán>Inglés)tralcetto (Italiano>Inglés)google tradu (Alemán>Francés)body of proof (Inglés>Francés)mit wem redest du (Alemán>Inglés)nulla facilisi (Latín>Alemán)exam pe dhyan de (Hindi>Inglés)